Pedicure matihanina - Ahoana no anaovanao azy tsikelikely | Bezzia
Te hanana pedicure matihanina ve ianao? Ka tsy misy na inona na inona toy ny fanarahana andian-dingana fototra ary manomboka ny tenanao hanao izany am-pitoniana ao an-tranonao. Araka izany, hanana fotoana manokana ho anao ianao, hankafizanao fotoana tsy manam-paharoa ary hahazoana vokatra tsara kokoa ho an'ny fantsika, satria mila izany koa ny tongotrao.
Marina fa mandritra ny vanim-potoana fahavaratra dia ataontsika loha laharana bebe kokoa izany, fa na dia tonga aza ny fararano dia tsy tokony avelantsika handositra izy. Satria ny fikarakarana tongotra fototra ihany koa izany ary noho izany antony izany dia mila ataontsika mandritra ny taona. Aza adino ny fomba hanaovana azy satria lazainay aminao izao ny zava-drehetra.
1 Manomàna fandroana tongotra
2 Pedikiky matihanina: Hetezo ary alao ny fantsika
3 Karakarao ny kutikula sy ny voditongotra
4 Safidy enamel
5 Ny mikasika farany
Manomàna fandroana tongotra
Amin'ny tranga sasany dia tsy izy foana no dingana voalohany, fa amin'ny antsika dia io. Satria amin'ity fomba ity azontsika atao ny manalefaka ny hoditra raha ny fanesorana ireo kileman-toetra sasany. Ka, tsy misy toy ny rano mafana kely ao anaty fitoeram-be izay mamela antsika hametraka ny tongotra roa. Azonao atao ny manampy huile essentielle vitsivitsy mba hahamarika ny halemem-panahy rehetra fa ny fialan-tsasatra tonga lafatra koa. Noho izany, mila miandry ianao mandra-mangatsiaka be ny rano. Ka afaka manararaotra manao asa amin'ny solosaina foana ianao na izay tianao.
Pedikiky matihanina: Hetezo ary alao ny fantsika
Rehefa avy nanasa sy nanamaina ny tongotrao ianao dia tonga ny fotoana hitsaharana hoho. Aza adino fa tsara kokoa ny tsy manome azy ireo endrika boribory satria mety tonga nofo izy ireo, fa afaka mankafy ny fanapahana voalanjalanja ianao, ka rehefa tonga ny lokony dia hitovy ny fanamiany. Mazava ho azy, ankoatry ny fanapahana azy, mila mametraka azy ireo ianao. Satria ity dingana ity dia tena ilaina mba hahafahana manafoana ireo faritra na sisiny mipoitra izay mivohitra hatrany.
Karakarao ny kutikula sy ny voditongotra
Cuticle dia ampahany manan-danja iray hafa amin'ny tanana sy tongotra.. Noho izany dia mila mitandrina azy ireo ianao raha tsy te-hanala azy ireo. Ny hataonao dia asio menaka vitsivitsy mitete amin'izy ireo. Mba hahafahantsika manalefaka azy ireo. Araraoty ary manotra ny tongotra iray manontolo, manasongadina ny ampahany amin'ny voditongotra. Satria iray hafa izay afaka manome olana antsika ary miseho triatra sasany. Noho izany, mila mampiditra hydration ianao ary mitady vato pumice hanao veloma ny hoditra maty. Vantany vao vita ianao dia asio moisturizer.
Indraindray isika dia afaka mametraka poleta amin'ny hoho rehefa tsy vita ny mahazatra. Raha tsy izany dia afaka miloka amin'ny dingana farany ianao izao, izay ny fampiharana loko. Na dia teo alohan'io aza dia tsy maintsy manampy sosona miaro ianao ary atsofohy maina. Ho tonga ny fotoana hisafidianana ny lokon'ny enamel. Azonao atao ny manao famolavolana milamina na, manome azy sary an-tsaina ary miloka amin'ny famoronana mamorona, ohatra, amin'ny fantsika amin'ny rantsan-tongotra. Na inona na inona safidinao, lokoo izy ireo ary avelao ho maina tanteraka izy ireo. Raha vao maina dia mila apetaka gloss ianao mba hahagaga kokoa ny valiny ary haharitra ela kokoa.
Ny mikasika farany
Raha vao nampihatra ilay enamel isika dia marina fa tsy maintsy avelantsika ho maina tsara izy io. Saingy misy dingana farany mbola tsy maintsy ataontsika ary izany dia mila indray miloka amin'ny sosona moisturizer manerana ny tongotra. Marina fa efa dingana nataontsika io fa tsy ho ny farany. Arakaraka ny hidradradradra no tsara kokoa ka tonga ny fotoana miloka aminy. Ankehitriny dia hanana pedicure matihanina ianao hahafahanao mampihatra azy amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana tianao. Azo antoka fa tsy ho sarotra araka ny tokony ho izy!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Pedikiky matihanina: Ahoana ny fomba anaovana azy tsikelikely